UBig Zulu ukhuthaza abaculi baseMgungundlovu | News24
UBig Zulu ukhuthaza abaculi baseMgungundlovu
ISITHOMBE : lethiwe makhanyaUSyabonga Nene owaziwa ngoBig Zulu.
UMREPHA odumile, uSyabonga Nene owaziwa ngoBig Zulu, usenxenxe abaculi be-hip hop abasafufusa eMgungundlovu ukuba bawuthande umculo wabo bese bayabekezela ukuze babone impumelelo.
UBig Zulu ubexoxa ne-Echo ngesikhathi ehambele indawo yaseMgungundlovu ngoLwesibili mhla zili-16 kuMfumfu (October) njengengxenye yokuzama uku-promoter i-album lakhe elisha elisihloko sithi Ushuni wenkabi neliphume ezinyangeni ezimbili ezedlule. Le-album linezingoma ezili-14. UBig Zulu uthe kubalulekile ukuthi abaculi abancane abasafufusa bazi ukuthi bafunani baphinde bafunde ukubekezela.
“Kumele uyithande into yakho oyenzayo bese uyabekezela ngoba akukho okudlula ukubekezela, kodwa uma ungayithandi into yakho, ayikho into ozoyibekezela.Uma wenze njalo ayikho into ezokuvimba ukufinyelela lapho ufuna ukuya khona, noma kanjani uzogcina uphumelelile.
“Enye into ebalulekile kakhulu kubaculi abasakhula ukuthi abayeke ukuzitshela ukuthi bona sebengosomaqhuzu kulomkhakha. Uma ungumculi nje kumele ungakhulumi kakhulu kodwa uyeke umsebenzi wakho kube iwona ozikhulumelayo. Kumele wenze isiqiniseko futhi sokuthi umculo wakho unomyalezo, unento oyifundisa abantu,” kubeka yena. Uqhube wathi lelicwecwe lihlukile kakhulu njengoba likhuluma ngezinto ezahlukene.
“Le-Album akusiyona nje eye-hip hop lena eyejwayelekile. Iyisintu kakhulu kanti futhi iyafundisa, ingalalelwa abantu abadala kanye nabancane kodwa bonke kube khona abakufundayo.”
Uthe isifiso sakhe ukuthi ngelinye ilanga naye akwazi ukuba nezinhlelo lapho ezofundisa khona intsha ngohlobo lo mculo we-hip hop.
Ngaphandle kokuba umculi, uBig Zulu uphinde abe ngumlingisi emdlalweni kamabonakude Isibaya, aphinde abe yijaji ohlelweni luka-SABC1 i-One Mic oludlala njalo ngoLwesihlanu ngehora lesithupha ntambama (6 pm).